መዝሙር 43 NASV - Nnwom 43 ASCB
1Ao Onyankopɔn, bu me bem,
na ka mʼasɛm a ɛtia ɔman a wɔnnsuro wo no ma me;
gye me firi nnaadaafoɔ ne amumuyɛfoɔ nsam.
2Woyɛ Onyankopɔn, mʼabandenden.
Adɛn enti na woapo me?
Adɛn enti na ɛsɛ sɛ menantenante twa adwo
mʼatamfoɔ nhyɛsoɔ nti?
3Soma wo hann ne wo nokorɛ
ma wɔn nkyerɛ me ɛkwan;
ma wɔmmfa me mmra wo Bepɔ Kronkron no so,
faako a woteɛ hɔ.
4Afei, mɛkɔ Onyankopɔn afɔrebukyia anim
mʼanigyeɛ ne mʼahosɛpɛ Onyankopɔn nkyɛn.
Mede sankuo bɛyi wo ayɛ,
Ao Onyankopɔn, me Onyankopɔn.
ASCB : Nnwom 43